Saar slurry, slurry saar impeller, usheeda dhexe Sleeve - Winclan
Shijiazhuang Winclan Makiinado Qalabka Co., Ltd.Our saarka ugu weyn waxaa ka mid ah bamka kala duwan. Bambooyinkeena waxaa si weyn loogu isticmaalaa ilaalinta deegaanka, macdanta, dhuxusha, dhirta tamarta kuleylka, batroolka, kiimikada, daaweynta bullaacadaha, noocyada mashaariicda dhowrista biyaha, waraabka beeraha, dhismaha, iwm. Isla mar ahaantaana, waxaan sidoo kale ku lug leenahay fureyaasha bilowga iyo qalabka bamgareynta. Iyada oo leh noocyo kala duwan, tayo wanaagsan, qiimo macquul ah iyo naqshado casri ah, alaabooyinkeenna waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa batroolka, kiimikada, daawooyinka iyo warshadaha kale.
Tani waxay taageertay koox farsamo oo xoog leh iyo injineernimo codsi dhammaystiran iyo xarun naqshadeyn ah.
Waxaan ku faaneynaa inaan siino khibrad helitaan aan kala go 'lahayn oo leh koox iib ah oo heegan ah oo heegan ah si loo hubiyo in macmiil kasta uu helo adeegga ugu fiican ee suurtogalka ah.
Shahaadadayada ISO 9001: 2008 waxay hubisaa gaarsiinta shuruudaha macaamiisha iyadoon laga reebin.
Mashiinka Xakamaynta Qalabka - 032
Saxanka Daboolka Meelaha
YW Submersibel Bullaacadda Bamka
Bamka biyaha la geliyo ee YZ
BAMBAARKA DHEXDHEX MA SAAR KARA SABABTA BIYAHA
Waxaa jira hawo ku jirta marinka iyo bamka (1) dadka isticmaala qaarkood ma buuxiyaan biyo ku filan kahor inta bamku uusan bilaaban; mararka qaarkood biyaha u muuqda inay ka soo qulquleen godka hawo-mareenka, laakiin uma jeedin mashiinka mashiinka inuu hawo gebi ahaanba daalayo, isagoo u daayay hawo yar oo wali ku jirta tuubada ama mashiinka (2) wi ...
DHAQANKA DHAQANKA PILE DHISMAHA SHAQAALAHA DAAWEYNTA DARYEELKA
Sidee buu dhoobada shaqadu uga soo baxaysaa godka caajiska ah? Tani waa dhibaato adag oo ah qodista dhismaha raso. Qodista dhaqameed iyo barnaamijka daaweynta dhoobada qashinku waa: habka loo qodayo isticmaalka shaandhada, dhoobada ku jirta quruurux yar, ciid iyo waxyaabo kale oo adag oo kala go 'ah,
SABABTA FALANQAYNTA SIIBIDDA FARSAMADA FARSAMADA XARUNTA
Xiritaanka bamka Centrifugal badanaa waxaa sababa cillad bixinta shaabadda farsamada. Ka gaabinta waxqabadka inta badan baxsiga, sababaha soo daadashada soo socota: le daadadka dusha sare ee maaddada dusha sare ee firfircoon iyo firfircoonida, sababaha ugu waaweyn ayaa ah: joogsashada diyaaradda dhammaadkeeda, qallafsanaanta ma aysan la kulmin req ...
Shijiazhuang Winclan Makiinado Qalabka Co., Ltd.